टाउको दुखाइले सतायो ?यसरी घरेलु उपचार गरी तपाईंले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ! - हिपमत
टाउको दुखाइले सतायो ?यसरी घरेलु उपचार गरी तपाईंले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ !
शारीरिक श्रमको कमी, तना व, बदलिएको व्यस्त जिन्दगीका कारण मानिसहरुमा टाउको दुखा इको समस्या पछिल्ला दिनहरुमा बढिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । जसले गर्दा तपाईंको काम प्र भावित हुन सक्छ भने समयमै वास्ता गरिएन भने भने यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । टाउको दुखा इका लागि तपाईले घरेलु उपचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईंले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
पुदिना:- माइग्रेनको उपचारमा पुदिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । पुरानो समयमा पनि टाउको दुखाईको उपचारको लागि पुदिना दिने गरिन्थ्यो । यदि तपाईंलाई लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने तपाईंले पुदिनलाई चियामा मिसाएर पिउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई तुरुन्त राहत प्रदान गर्छ ।
कागती र तातो पानी:- लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने एक ग्लास तातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउनुहोस् । किनभने धेरैपटक पेटमा ग्याँस बनेका कारण पनि टाउको दुख्ने गर्दछ र कागती पानीले ग्याँसको समस्या हल गर्नुका साथै टाउकोको दुखाई पनि कम गर्दछ ।